Warshadaha Qalabka Taleefoonada - Shiinaha Soo -saareyaasha Taleefoonnada iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Waxaan nahay soo -saare xirfadle ah oo alaab -qeybiyeyaasha ka ah taleefannada gacanta ee Shiinaha waxaana naga go'an inaan siinno adeegyada OEM / ODM jumladaha, magacyada, shirkadaha iyo qeybiyeyaasha caalamiga ah. Noocyada badeecadeena ugu weyn waxaa ka mid ah kiisaska taleefanka gacanta ee la habeeyay, kuwa haysta taleefanka gacanta, aaladaha taleefanka gacanta, xargaha taleefanka, nadiifiyeyaasha shaashadda taleefanka gacanta, iwm. Inta badan aaladaha taleefanka gacanta ee leh caaryaal jira ma qaadaan khidmadaha caaryada. Qalabka taleefanka ee gaarka ah oo leh nashqadeyntaada, astaanta, sumadda gaarka ah, iyo baakadaha. Baadh kiisaskayaga kala duwan, kuwa giraanta haysta, taleefoonnada iyo waxyaabo kaloo badan.